मृत्यु हुनुभन्दा ठीक अगाडि हाम्रो दिमागले के सोच्छ ? « Dhankuta Khabar
समय : 4:38 AM
एजेन्सी । मृत्यु हुनुभन्दा ठीक अगाडि मानिसको दिमागमा के हुन्छ ? अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्तिसँग यसको सटिक जवाफ छैन । वैज्ञानिकहरुसँग केही जानकारी अवश्य नै छ, तर यो प्रश्न ‘सेक्रेट’ नै बनेको छ ।
तर वैज्ञानिकहरुको टीम मानिसको सम्बन्धमा यस प्रक्रियाबारे अरु गहिराइबाट जान्न चाहन्थ्यो । यसकारण उनीहरुले केही बिरामीहरुको न्यूरोलोजिकल गतिविधिको पनि निगरानी गरे ।
शोधकर्ताहरुलाई डाक्टरबाट निर्देशन दिइएको थियो कि यी बिरामीहरुलाई इलेक्ट्रोड स्ट्रिप्स आदिको प्रयोग गरेर बेहोसीबाट होसमा ल्याउने कोसिस नहोस् ।
न्यूरोनको काम गर्ने प्रक्रिया यस्तो हुन्छ कि उनीहरु आवेशित आयनबाट आफूलाई भर्छन् र आफ्नो तथा आफ्नो वातावरणको बीचमा विद्युतीय असन्तुलन बनाउँछन् । यसबाट यी न्यूरोनले छोटो झट्का (शक) उत्पन्न गर्न सक्षम हुन्छन् ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार यस्तो विद्युतीय असन्तुलन बनाएर राख्नु एक लगातार हुने प्रयास हो । यसका लागि यी कोषहरु बगिरहेको रगतको प्रयोग गर्छन् । त्यस्तो रगतबाट ती कोषहरुले अक्सिजन र रसायनिक उर्जा प्राप्त गर्छन् ।
यद्यपि यसलाई प्रयोगमा ल्याउन अझै धेरै शोधको आवश्यकता रहेको द्रेयर बताउँछन् । द्रेयर भन्छन्, ‘मृत्युजस्तै यो दिमागी आयाम एक जटिल घटना हो । यससँग जोडिएका गम्भीर प्रश्नहरुको सहज जवाफ छैन ।’-लोकान्तरबाट